Ogaden News Agency (ONA) – Shirkii Kalfadhigii 2aad ee Ururka OYSU Worldwide iyo Qudbadihiisii oo Furmay
Shirkii Kalfadhigii 2aad ee Ururka OYSU Worldwide iyo Qudbadihiisii oo Furmay
Posted by ONA Admin	/ January 2, 2012
Waxaa maanta oo ay taariikhdu tahay 2-1-2012 si toos ah uga furmay kala fadhigii labaad ee ururka dhalinta (OYSU) Aduunka.
Kala fadhigaas ayaa waxaa kasoo qayb galay dhamaan ururka dhalinta ee aduunka & madaxda JWXO.
Waxayna ka kala yimaadeen Wadamada ururka dhalinta,
Sidaanu horay idiinku sheegnay dhamaan dhalintaa ka kala timid daafaha aduunka ayaa kal fadhigan ku lafa guraysa waxyaalo badan oo wax tar u leh Halganka Ogadenia kuna dajinaya qorshe howleedyo fara badan kuwaas oo ah kuwii lagu hawl gali lahaa sanakan maanta bilowga ah ee 2012-ka.
Waxaa ugu horeyntiiba sida caadada ahayd lagu furay aayadaha quraanka kariimka maadaama aynu nahay dad islaam ah, kadib waxaa lagu xijiyay heestii calanka oo ay ku luuqaynayeen dhalinta OYSU.
Kadib ayaa cod baahiyaha lagusoo dhaweeyay X.Hayaha guud ee OYSU Mudane Mujaahid sh. Ibraahin hambalyo & bogaadin uu dhalinta usoo jeediyay kadib ayuu waxuu ugu baaqay Marwa Leyla Abdulaahi oo ka sheekaysay xaaladihii uu soo maray ururka dhalinta, Heerarkii iyo Marxaladihii kala duwanaa & magacyadii uu lahaa urur walba & walibana siduu u midoobay.
Kadib waxaa wacdi aad u qiima badan dhalinta & dhamaan waftigii madasha isugu yimid usoo jeediyay Hogaanka ( HAAB) ee JWXO Mudane Mahamed Abdi Yasiin (DIIRANE)
Wacdiga uu mudanaha soo jeediyay ayaa waxuu ku saabsanaa Halganka xaqqa ah ee ummada somalida Ogadeniya kula jirto Gumeysiga. Xaaji Maxamed Cabdi Yasiin waxa uu aad ugu booriyay dhalinta kaqeyb qaadashada halganka Somalida Ogadeniya isaga oo tusaaleyn badan kasoo qaatay siiradii nabiga S.C.W iyo Quraanka Kariimka ah- halgamadii ummada islaamku soo mareen iyo siday waajib ugu tahay qofkastaba inuu u gargaaro ummad ku hoos nool gumeysiga.